Xubnaha kasoo goosta Alshabaab oo fuliya falal isugu jira Dil & Basaasnimo [Dhageyso kashifaad Xasaasi ah] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Xubnaha kasoo goosta Alshabaab oo fuliya falal isugu jira Dil & Basaasnimo [Dhageyso kashifaad Xasaasi ah] - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xubnaha kasoo goosta Alshabaab oo fuliya falal isugu jira Dil & Basaasnimo [Dhageyso kashifaad Xasaasi ah]
Qaar ka mid ah dadka kasoo goostay Al-Shabab waxay dileen madax iyo ciidan, halka kuwo kale ay dib u laabtaan muddo marka ay joogaan.
Qaar kale waxay ururiyaan xogta laamaha dawladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsigeliyaan, si ay uga hor istaagana inay wada shaqayn la sameyaan dawladda ama inay macluumaad siiyaan – sidaasi waxaa barnaamijka Galka Baarista ee Idaacadda VOA u sheegay khubaro dhinaca amniga.
HOOS KA DHAGEYSO BARNAAMIJKA GALKA BAARISTA
Previous articleDowladda Qatar oo sheegtay inay ka guuleysatay Go’doomintii Isbaheysiga Sacuudiga & Imaaraadka
Next articleDEGDEG: Alshabab oo Weerar culus ku qaaday Kolonyo & Xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle oo la dilay…